Ifektri yomenzeli ogwebu - China Abenzi Bamagwebu Abenzi, abahlinzeki
i-microsphere ejenti ekhihlizayo uhlobo olusha lwe-ejenti ekhethekile enegwebu ekhiqizwa yiJOYSUN. Kuyizinhlayiya ezincane eziyindilinga (ukubukeka okuncane kuphuzi ngokukhanyayo noma kumhlophe), igobolondo le-thermoplastic liyathamba ngemuva kokushisa, ivolumu ye-ejenti enegwebu ingakhula ikhula ngokushesha ibe nezikhathi eziningi, igobolondo le-micro ball aliqhume, lihlala liyibhola eliphelele lokuvala uphawu , ukuze kuzuzwe umphumela wegwebu. Isagcina umphumela ophuphuma amagwebu ngemuva kokupholisa futhi awunciphi. Umkhiqizo wegwebu uhambe ...
Nikeza osayizi abahlukahlukene be-PTSS, i-TSH, i-bicarbonate powder eguquliwe nokuqukethwe kwe-40% -70% masterbatch. I-ejenti emhlophe ekhihliza amagwebu iyi-ejenti ekhihliza amagwebu engapheli. Ayinaphunga, Ukusebenza kwayo kuzinzile futhi kunokuhlakazeka okuhle. Imikhiqizo enemibala emihle, imbobo ye-bubble ngokulinganayo. I-ejenti emhlophe enegwebu ilungele i-raber kanye ne-plastic extrusion kanye ne-injection mold molding, iphrofayili ye-PVC kanye ne-sheet extrusion, i-injection foam, umkhiqizo omhlophe okhihliza amagwebu, Ingasetshenziswa futhi njenge-ejenti ye-nucleating ekwehliseni amagwebu ngokomzimba ...
I-ejenti enegwebu le-ADC lisetshenziswa kakhulu kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo yenjoloba kanye nepulasitiki. Singanikeza i-Adc emsulwa ngobukhulu bezinhlayiya ezihlukile ze-4μm, 5μm, 6μm, 8μm, 10μm ne-12μm, kanye nemikhiqizo eguquliwe yokusetshenziswa. It has charateristics of kanzulu partical usayizi ukusatshalaliswa, ukuhlakazwa omuhle. Izicelo 1.PVC foam board / board board / ifenisha board / foam foam / 2.PVC WPC foam board 3.PS picture frame 4.XPE 5.PP imikhiqizo yomjovo 6.PVC shoes
I-ejenti enegwebu le-OBSH isetshenziselwa ukukhiqiza iphunga elingenamphunga, elingenakho ukungcoliswa kwemikhiqizo, elingagcini ukubola, elinomumo ofanayo, okhihliza amagwebu. Ifanele iraba yemvelo nezinhlobonhlobo zenjoloba zokwenziwa (njenge: EPDM, SBR, CR, FKM, IIR, NBR) nemikhiqizo ye-thermoplastic (efana ne-PVC, PE, PS, ABS), Ingasetshenziswa futhi enhlanganisweni enjoloba.
Umenzi we-PVC okwehla amagwebu
Ibhodi lokukhangisa le-foam le-1.PVC, ibhodi lefenisha nebhodi lokwakha i-2.PVC iwindi legwebu kanye nephrofayili yomnyango i-PVC WPC foam
Isingeniso somkhiqizo I-ejenti enegwebu isetshenziselwa i-PS extrusion Application application
Isingeniso somkhiqizo I-ejenti ekhihlizayo isetshenziselwa i-PP Injection & extrusion Function Function, Qeda amamaki okuncipha lapho umkhiqizo ufakwa, futhi ukubonakala komkhiqizo ngeke kuthinteke ② Nciphisa ukugoba noma ukusonteka okubangelwa yingcindezi yangaphakathi nokuncipha, ukunciphisa ukubunjwa komjovo isikhathi, unciphise isikhathi somjikelezo, uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqizwa ④ kunganciphisa isisindo ngo-10-30% (ngokuya ngosayizi womkhiqizo), kusiza ukunciphisa izindleko zama-raw ...
Isingeniso somkhiqizo i-XPE iyinto enamakhemikhali ehlanganiswe ne-polyethylene foam, uma iqhathaniswa ne-EPE (i-polyethylene ene-foamed ebonakalayo, eyaziwa ngokuthi i-pearl cotton), Amandla okuqina aphakeme futhi amaseli acolekile. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto ze-PE noma ezingezona eze-PE, okokusebenza kwe-PE kunokusebenza okuhle kakhulu ekuqineni, ukumelana nokukhanya, ukumelana nomthelela ngokomzimba nezinye izici. I-XPE ngokwayo inezakhiwo zamakhemikhali ezizinzile, akulula ukubola, ayinaphunga, futhi iyaqina okuhle. Ukuyisebenzisa ...
PC & PA & ABS umjovo ejenti amagwebu
Isingeniso somkhiqizo I-ejenti enegwebu isetshenziselwa i-PC & PA & ABC Injecting Function Function, Qeda amamaki okuncipha, futhi ukubukeka komkhiqizo ngeke kuthinteke ② Nciphisa ukugoba noma ukusonteka okubangelwa yingcindezi yangaphakathi nokuncipha, ukunciphisa isikhathi somjovo wokubumba, ukunciphisa isikhathi somjikelezo, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza ④ kunganciphisa isisindo ngo-10-30% (kuya ngosayizi womkhiqizo), kunciphise izindleko zezinto zokusetshenziswa PC Isicelo & PA & ABS p ...
Isingeniso somkhiqizo Ayikho i-formamide Agent Agent Izici ze-ejenti ekhihlizayo ayinabuthi, ayinaphunga, izinhlayiya ze-powder encane, ukusabalalisa okuhle ku-polymer enamabhamu afanayo. Ukupakisha nokugcina isikhwama seplastiki noma se-kraft esikhwameni sephepha ngama-25kgs. Ukuzinza kuhle njengokugcina ekamelweni lokushisa. Gcina endaweni epholile, eyomile kude nemithombo yokushisa, izinhlansi nokushisa. Isicelo somkhiqizo Ingasetshenziswa emandleni amasha, ezempi, ezokwelapha, ezokundiza, ukwakha umkhumbi, i-electronics, i-auto ...